Dawlada GNA ee Libya Ayaa iska difaacday Hadlkii Madaxweynah Masar Sisi oo u Soo hanjabay | Dhexnimo Media
Home Wararka Dawlada GNA ee Libya Ayaa iska difaacday Hadlkii Madaxweynah Masar Sisi oo...
Dawlada GNA ee Libya Ayaa iska difaacday Hadlkii Madaxweynah Masar Sisi oo u Soo hanjabay
Dowlada la aqoonsnyahay ee loo yaqaan (GNA) ayaa dhalleeceysay digniinta Masar ee faragelinta militari ee Libya, kuna tilmaamtay “ku dhawaaqis dagaal”.
Sabtidii, Madaxweynaha Masar Abdel Fattah el-Sisi wuxuu ka digayaa haddii ciidammada taabacsan GNA ee ku sii jeeda magaalada istiraatiijiga ah ee Sirte taas oo illaa 450 kiiloomitir (280 mayl) bari ka xigta caasimadda Tripoli – inay kicin karto faragelin “toos ah” o
El-Sisiga Masar wuxuu amar ku siiyay ciidamadiisa inay diyaar u noqdaan hawlgallada dibedda
Madaxa EU wuxuu ku booriyay urur weynaha inay kordhiyaan taageerada howlgalka Liibiya
Sidoo kale wuxuu amar ku siiyay ciidamada Masar inay diyaar u yihiin inay fuliyaan howlgalada gudaha ama dibedda ee dalka si ay u ilaashadaan amnigiisa qaran iyadoo ay jiraan xiisado ka dhashay faragalinta Turkiga ee Libya.
Isaga oo ka jawaabaya, GNA ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tallaabada Masar ay ahayd “ficil cadaawad iyo faragelin toos ah, waxayna u dhigantaa ku dhawaaqis dagaal”.
Bayaanka ayaa ku soo aadaya maalin ka hor kulan casri ah oo wasiirada arrimaha dibada ee jaamacadda carabta ay ku yeesheen Libya, kaas oo GNA ay diiday in ay ka qeyb gasho.
Waxay sheegtay inay u furan tahay “dhammaan dhexdhexaadinta dhexdhexaadka ah … iyada oo la raacayo sharciga Qaramada Midoobay” laakiin la diiday “dadaallada midaysan ama mid ka baxsan sharciga”.
Libya oo hodanka ku ah saliida ayaa qalalaasa ka taagneyd tan iyo markii kacdoonkii NATO ay taageertay sanadkii 2011 hogaamiyihii xukunka laga tuuray Muammar Gaddafi.
Laga soo bilaabo sanadkii 2015, halgan awoodeed ayaa ku kalifay GNA-da fadhigeedu yahay Tripoli inuu ka soo horjeedo taliyaha millatariga ee Khalifa Haftar, kaasoo sheeganaya sharci ahaanshaha baarlamaanka la doortay ee bariga.
Haftar wuxuu isku deyey inuu ku guuleysto inuu qabsado caasimadda tan iyo bishii Abriil ee 2019, isagoo taageero ka helaya Masar, Ruushka iyo Imaaraadka.
Ilaa bilowgii Bishii June, kordhinta taageerada Turkiga ayaa u suurta gelisay ciidamada taabacsan GNA inay la wareegaan waqooyi-galbeed Libya, iyagoo soo afjaraya weerarkii Haftar ee Tripoli.
Horumarka GNA ayaa hadda la joojiyay meel ka baxsan magaalada xeebta ah ee Sirte, oo ah marin istiraatiijiyad u ah marinnada saliida muhiimka ah ee Liibiya oo weli gacanta ugu jira Haftar.
Sirte iyo Al-Jufra ee koonfurta waxay matalaan “xariiqda casaanka”, el-Sisi ayaa sidaa ka sheegay telefishanka Masar Sabtidii, isaga oo tilmaamaya baahida loo qabo in la ilaaliyo xudduudka Masar.
Haddii khadkaan laga gudbo, ciidamada Masar waxay si toos ah u faragelin doonaan Liibiya, ayuu yidhi el-Sisi.
“Dhamaan Liibiya waa xariiq casaan ah,” ayay GNA ku jawaabtay. “Wax alla wixii khilaaf ah oo ka dhexeeya Liibiya, uma oggolaan doonno in dadkeenna la caayo ama loo hanjabo.”
Laakiin afhayeenka baarlamaanka bariga Libya, Aguila Saleh, ayaa difaacay bayaankii el-Sisi, isagoo sheegay hadal uu soo saaray maanta oo Axad ah in madaxweynaha Masar “uu ka jawaabayo baaqii aan u jeedinay baarlamaanka Masar” bishii Janaayo ee la soo dhaafay kaas oo Saalax ku baaqay in faragelinta Masar lagu sameeyo Libya. .
Iyo Axadii, wasaaradda arrimaha dibedda ee Jordan ayaa soo saartay bayaan ay ku leedahay Amman wuxuu ku taageeraa Qaahira “ka soo horjeedo khatar kasta oo ku soo food leh amniga iyo xasilloonida” Masar.
Waxay timid kadib markii wasiiradda arrimaha dibedda ee labada dal ay khadka taleefanka kaga wada hadleen khilaafka Liibiya
Previous articleAadan Barre oo laga qaaday xilkii uu ka hayey Kenya
Next articleMadaxweyne Biixi Oo Sheegay In Somaliland 4 Bilood Ku Qabsatay Wax Aanay 10-ka Sano Ku Qabsateen